Dad Reer Somaliland Ubadan Ayaa Ku Geeriyooday Shil Baabuur Oo Ka Dhacay Wadanka Suudan | Saxil News Network
Dad Reer Somaliland Ubadan Ayaa Ku Geeriyooday Shil Baabuur Oo Ka Dhacay Wadanka Suudan
Suudan (Saxil News.com)-Ugu yaraan 13 qof oo isugu jiray Somaliland iyo Soomaaliya oo Tahriibayaala ahaa, ayaa dhintay, ka dib markii Gaadhi ay saarnaayeen oo ay ku Safrayeen Shil kula galay waddanka Sudan, gaar ahaan meel ku dhaw Caasimadda dalkaas ee Khartum, kaasoo gaadhi kale ku dhacay xalay habeennimadii Isniinta, halka qaar kalena dhaawac yihiin. Sida wararku sheegayaan 2 Qof oo kamid ah dadka dhintay ayaa u dhashay Somaliland, kuwaas oo ahaa Gabadh iyo Wiil walaalo ah.
Tahriibayaashan oo ahaa Soomaali ka kala tegay Hargeysa iyo Muqdisho iyo meelo kale oo dhulka Soomaalida ka mid ah, ayaa ku socday dhinaca dalka Liibiya, waxaana shilkani ku dhacay markii ay bilaabeen Safarka ay kaga tegayeen Suudaan, isla markaana doonayeen inay ku tagaan waddanka ay Xadka leeyihiin ee Liibiya.
Hase-yeeshee, waxa uu shilku ku helay markii ay safarkooda bilaabeen. Shilkan Baabuur, ayaa la sheegay inuu ka dhashay Gaadhiga ku socday Liibiya oo ay ku Safrayeen Tahriibayaashan oo ku socday Xawaare aad u sarreeya, waxaanu isagoo dheeraynaya ku dhacay Gaadhi kale oo isaga laftiisu Xawaare sare ku ordayey.
13-ka Soomaalida ah ee Shilkaa Baabuur ku dhintay, ayaa Meydadkooda la geeyey magaalada Khartuum ee Caasimadda dalku Suudaan. Fiidaw Maxamed Fiidaw oo Safaaradda Soomaaliya ee Khartun u qaabbilsan qaybta Warbaahinta, ayaa Saxaafadda u sheegay inaan weli la aasin Meydadkaas, balse la aasi doono marka la aqoonsado, inta la aqoonsanayo dhammaantoodna ay Meydadku oolli doonaan.
Fiidaw waxa uu sheegay in Gaadhiga ay Tahriibayaashani ku safrayeen oo marka uu dhacay marayey jid aan caadi ahayn oo qardo-jeex ah, maaddaama oo aanay awoodin inay maraan waddooyinka Sharciga ah si aan loo qaban, isagoo gaadhigaasi ka ordayey in lagu qabto dad sharci-darro dalka ku galay inuu sharci-darro haddana ugu gudbinayo xadka dalka kale ee Liibiya.
Allaah ha u naxariistee Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee geeriyooday, ayaa la sheegay inay sii mareen dalka Itoobiya oo ay uga gudbeen Sudan, hase-yeeshee, ay muddo si qarsoodi ah ku joogeen Sudan oo dhawaanahan adkaysay dadka dalkeeda ku tegaya sida sharci-darrada ah iyo kuwa doonaya inay Safarrada sharci-darrada ah kaga gudbaan dalkeeda, una socda Liibiya, si ay halkaas Tahriib Badda ah uga sii bilaabaan si ay ugu gudbaan waddanka Talyaaniga oo ay Tahriibayaasha Afrikaanka ahi uga sii baxaan dalalka kale ee Qaaradda Yurub.
Dhalinyarada Soomaalida, ayaa ka mid ah Afrikaanka tirada badan ee sannadkasta ka haajira dalalkooda, una badheedha Safarrada halaagga iyo dhibaatada badan ee Saxaraha iyo Badda inay maraan, kuwaasoo intooda ka nabadgasha halaagga Saxaraha iyo Badda ay gaadhaan Talyaaniga oo ay uga sii haajiraan dalalka kale ee Qaaradda Yurub si ay nolol ka roon ta ay dalalkooda ku haysteen